Yɛde Yɛn Ho Ato Yehowa So Anya Nhyira Pii | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Yɛde Yɛn Ho Ato Yehowa So Anya Nhyira Pii
Malcolm Allen anom asɛm
Wiase a yɛwom yi obi nnim ɔkyena asɛm; ɛtɔ da bi a nneɛma kɔ yiye, ɛtɔ da nso a na emu ayɛ den paa. Nanso sɛ obi amfa ne ho anto ne ho so na ɔde ne ho to Yehowa so a, ohyira no. Me ne me yere ahu sɛ saa asɛm yi yɛ nokware. Bere tenten a yɛde atena nyinaa Yehowa nnyaw yɛn. Ma yɛmmɔ wo yɛn asetenam nsɛm kakra.
ME PAPA ne me maame hyiae 1919 wɔ nhyiam bi a Bible Asuafo no yɛe wɔ Cedar Point, Ohio, U.S.A. ase. Saa afe no ara na wɔwaree. Wɔwoo me 1922, na mfe abien akyi no, wɔwoo me nua Paul. Wɔfrɛ me yere Grace, na wɔwoo no afe 1930. Yɛfrɛ n’awofo Roy ne Ruth Howell, na na wɔyɛ Bible Asuafo. Na ne nananom nso yɛ Bible Asuafo, na na wɔn adamfo ne Onua Charles Taze Russell.
Mihyiaa Grace afe 1947, na yɛwaree July 16, 1949. Ansa na yɛreware no, yɛtenaa ase susuw nea yɛbɛyɛ daakye ho. Yɛde yɛɛ yɛn botae sɛ yɛbɛyɛ bere nyinaa som adwuma no, enti yɛrenwo. Yefii akwampae adwuma ase October 1, 1950. Afei 1952 mu no, wɔpaw me sɛ ɔmansin sohwɛfo.
AKWANTU ADWUMA NE GILEAD
Yɛn baanu nyinaa hui sɛ yebehia mmoa na yɛatumi ayɛ adwuma a wɔde ahyɛ yɛn nsa no. Misuaa nneɛma pii fii anuanom mmarima a wɔn ho akokwaw hɔ, na mehwɛe sɛ menya obi ma waboa Grace nso. Na yɛwɔ adamfo bi a ɔde Marvin Holien, na na wayɛ ɔhwɛfo kwantufo akyɛ, enti me ne no bɔɔ asɛm no ho nkɔmmɔ. Meka kyerɛɛ no sɛ Grace nyinii na onni suahu pii. Mibisaa no sɛ: “Wubenya obi ma ɔne no abom ayɛ asɛnka adwuma no de atete no?” Ɔkae sɛ onim onuawa bi a yɛfrɛ no Edna Winkle a obetumi aboa no. Ná wayɛ akwampae adwuma no akyɛ. Akyiri yi Grace kae sɛ, sɛ ɔne Edna kɔ asɛnka a, onya akokoduru di adanse. Afei sɛ obi mpɛ sɛ otie asɛm no mpo a, na Edna nim nea ɔbɛka. Bio, Edna kyerɛɛ Grace sɛnea ɔbɛyɛ aso atie nkurɔfo na watumi ama wɔn mmuae a ɛfata. Grace kae sɛ: “Ná ɔno ara ne obi a mihia!”
Fi Benkum: Nathan Knorr, Malcolm Allen, Fred Rusk, Lyle Reusch, Andrew Wagner
Me ne Grace som amansin abien wɔ Iowa mantam mu ne Minnesota ne South Dakota afã bi. Ɛno akyi woyii yɛn kɔɔ New York kɔsom Ɔmansin 1, na na Brooklyn ne Queens nyinaa ka saa ɔmansin no ho. Saa ɔmansin no ara mu na na Brooklyn Heights asafo no wɔ. Ná wohyia wɔ Ahenni Asa a ɛwɔ Betel no so, na na Betel abusua no mufo pii a wɔn ho akokwaw wɔ saa asafo no mu. Yehui paa sɛ yɛn nimdeɛ nnu baabiara. Nanso bere a memaa ɔkasa a edi kan wɔ saa asafo no mu wiei no, Onua Nathan Knorr baa me nkyɛn bɛka kyerɛɛ me sɛ: “Malcolm, afotu a wode maa yɛn no ye paa; yɛde bɛyɛ adwuma. Kae sɛ, sɛ wuhu biribi na wantu yɛn fo a, na woammoa yɛn. Ɛba saa a, ahyehyɛde no rennya wo so mfaso ahe biara. Kɔ so yɛ adwuma pa a woreyɛ no.” Yɛpɔn adesua no, meka kyerɛɛ Grace. Bere a yeduu yɛn dan mu wɔ Betel hɔ ara no, ɔbrɛ ne akomatu nti yesui.
“Kae sɛ, sɛ wuhu biribi na wantu yɛn fo a, na woammoa yɛn. Ɛba saa a, ahyehyɛde no rennya wo so mfaso ahe biara. Kɔ so yɛ adwuma pa a woreyɛ no”
Asram kakra akyi no, yɛn nsa kaa krataa sɛ yɛnkɔ Gilead Sukuu. Ná yɛka adesuakuw a ɛto so 24 no ho, na na yebewie February 1955. Ansa na yɛrekɔ sukuu no, wɔka kyerɛɛ yɛn sɛ ɛnyɛ asɛmpatrɛw adwuma nti na yɛrekɔ sukuu no. Mmom ɛbɛboa yɛn ma yɛatumi ayɛ akwantu adwuma no yiye. Na sukuu no yɛ akwannya kɛse paa ma yɛn, na ɛkyerɛɛ yɛn ahobrɛase nso.
Fern ne George Couch, ne Grace ne me wɔ Gilead, 1954
Bere a yewie sukuu no, wɔma yɛkɔyɛɛ ɔmantam adwuma. Yɛyɛɛ adwuma no wɔ Indiana, Michigan, ne Ohio. December 1955, da bi a yɛnkaa bi nhyɛɛ mu no, yɛn nsa kaa krataa fii Onua Knorr hɔ. Ɔkae sɛ: “Monka no pen nkyerɛ me. Sɛ mopɛ sɛ moba Betel bɛtena ha anaa mopɛ sɛ moba bere tiaa bi na akyiri yi mokɔsom wɔ amannɔne a, momma minhu. Sɛ nso mopɛ ɔmansin ne ɔmantam adwuma no a, monka nkyerɛ me.” Yɛka kyerɛɛ no sɛ adwuma biara a asafo no de bɛma yɛn no, yɛayɛ krado sɛ yɛbɛyɛ. Enti ntɛm ara na Betel frɛɛ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ adwuma wɔ hɔ!
Bere a mewɔ Betel no minyaa hokwan maa ɔkasa wɔ United States afã horow nyinaa. Metetee mmerante pii ma akyiri yi Yehowa ahyehyɛde no de dwumadi hyehyɛɛ wɔn nsa. Akyiri yi mekɔyɛɛ Onua Knorr kyerɛwfo. Ná yɛn ɔfese no na ɛhwɛ asɛnka adwuma a yɛyɛ wɔ wiase nyinaa no so.
Mereyɛ adwuma wɔ Ɔsom Dwumadibea, 1956
Baabi a m’ani gyei paa ne Ɔsom Dwumadibea. Mekɔtoo T. J. (Bud) Sullivan wɔ hɔ. Ɔno na bere bi na ɔhwɛ hɔ; ɔyɛɛ saa mfe pii. Anuanom foforo nso boaa me. Wɔn mu biako ne Fred Rusk. Ɔno na wɔde me maa no sɛ ɔntete me. Mekae sɛ da bi mibisaa no sɛ, “Fred, adɛn na mekyerɛw krataa a wosesa nneɛma pii wom saa?” Ɔserewee na ɔkae sɛ, “Malcolm, sɛ worekasa a, wubetumi akyerɛkyerɛ w’asɛm mu, nanso sɛ worekyerɛw krataa, ɛnkanka krataa a efi Betel a, ɛsɛ sɛ biribiara yɛ pɛpɛɛpɛ na ɛtɔ asom.” Afei ɔka kyerɛɛ me sɛ, “Ka wo koma to wo yam; worebɔ wo ho mmɔden paa, na nneɛma bɛyɛ yiye.”
Bere a yɛwɔ Betel no, Grace yɛɛ nnwuma ahorow pii. Adwuma biako a na n’ani gye ho ne sɛ obesiesie adan mu. Besi nnɛ nyinaa sɛ yehyia anuanom a na wɔyɛ mmerante wɔ Betel saa bere no a, wɔka kyerɛ Grace sɛ: “Wo na wokyerɛɛ me sɛnea wɔto mpa, na na me maame ani gye nea woreyɛ no ho.” Grace yɛɛ adwuma wɔ Nsɛmma Nhoma, Nkrataa, ne Kasɛt dwumadibea nso. Nnwuma ahorow ahorow a ɔyɛe yi ma ohui sɛ adwuma biara a Yehowa ahyehyɛde no de bɛma yɛn anaa baabiara a ɛbɛka sɛ yɛnkɔsom no, ɛyɛ hokwan ne nhyira kɛse. Ɛnnɛ mpo wubisa Grace a, asɛnkoro no ara na ɔbɛka.
NSAKRAE A YƐAYƐ
Bɛyɛ 1975 mu hɔ baabi no, na yɛn awofo agow enti na ehia sɛ obi hwɛ wɔn. Yehui sɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ ho biribi. Ná yɛmpɛ sɛ yefi Betel na yegyaw anuanom mmarima ne mmea a yɛne wɔn abɔ bere tenten no hɔ. Nanso na ɛyɛ m’asɛde sɛ mehwɛ yɛn awofo. Na asɛm no yɛ den, nanso akyiri yi yefii Betel. Ná yɛwɔ anidaso sɛ nneɛma yɛ yiye a, yɛbɛsan akɔ.
Nea ɛbɛyɛ na yɛanya sika kakra ahwɛ yɛn ho no, mepɛɛ adwuma bi yɛe. Ná mewɔ insurance adwuma bi mu. Ná mebɔ adwuma no ho dawuru kyerɛ afoforo. Bere a wɔretete me no, adwumam panyin biako kaa biribi kyerɛɛ me, na daa mekae saa asɛm no. Ɔkae sɛ: “Adwuma yi deɛ, anwummere anwummere na yɛyɛ no. Saa bere no na wubenya nnipa. Biribiara nni hɔ a ɛho hia sen sɛ wobɛkɔ nkurɔfo nkyɛn anwummere biara.” Meka kyerɛɛ no sɛ, “Migye di sɛ wunim nea woreka, na merennye wo akyinnye. Nanso me som ne ade a edi kan wɔ m’asetenam na ɛnyɛ afei na merebɛsesa m’adwene wɔ ho. Anwummere bi wɔ hɔ a, metumi akɔyɛ adwuma no bi. Nanso Benada ne Yawda anwummere biara, mekɔ nhyiam titiriw bi.” Mamfa adwuma ansesa asafo nhyiam, na Yehowa hyiraa me paa.
Ná me maame wɔ mmerewa ne nkwakoraa atenae, na owui July 1987 wɔ yɛn anim. Afei nɛɛse panyin a ɔwɔ hɔ no baa Grace nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ: “Awuraa Allen, kɔ fie kɔhome kakra. Obiara nim sɛ woantoto w’asebea yi ase koraa; wohwɛɛ no paa. Enti ka wo koma to wo yam; woayɛ wo fam deɛ.”
Saa bere no nyinaa na Betel da so ara da yɛn koma so, enti December 1987 no, yɛkyerɛw kɔe sɛ yɛpɛ sɛ yɛsan kɔsom wɔ hɔ. Nanso anni da bi na yehui sɛ Grace anya kokoram wɔ ne nsono mu. Wɔyɛɛ no oprehyɛn maa ne ho tɔɔ no, enti wɔka kyerɛɛ no sɛ ɔne kokoram nni hwee yɛ bio. Saa bere no ara na Betel kyerɛw yɛn. Wɔka kyerɛɛ yɛn sɛ yɛnkɔ so nyɛ ɔsom adwuma no wɔ yɛn asafo mu. Ná yɛasi yɛn bo sɛ yɛbɛkɔ so ayɛ pii wɔ Ahenni adwuma no mu.
Akyiri yi minyaa adwuma wɔ Texas. Ná awɔw nni hɔ kɛse enti yehui sɛ ɛhɔ bɛyɛ ama yɛn, na ampa-ne-ampa ara ɛhɔ ye ma yɛn. Yɛatena Texas mfe 25, na anuanom mmarima ne mmea a wɔwɔ hɔ ntoto yɛn ase koraa.
Mfe kakra ntam ni, Grace anya kokoram wɔ ne nsono mu, ne mene ase, ne ne nufu mu. Nanso onnwiinwii da. Afei Grace nsɔre ntia me, mmom obu me sɛ ne kunu. Nkurɔfo taa bisa no sɛ, “Dɛn na ama mo aware asɔ saa na daa mo anim yɛ sereserew yi?” Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ nneɛma anan na aboa yɛn: Yɛyɛ nnamfo, yɛbɔ nkɔmmɔ daa, yenya bere ma yɛn ho, na sɛ asɛm bi ba yɛn ntam a, yɛmfa abufuw nkɔda. Ɛwom, obiara tumi fom ne yɔnko nanso yɛde kyɛ na yɛma yɛn werɛ fi. Eyi aboa yɛn paa.
“Fa wo ho to Yehowa so bere nyinaa, na sɛ ɔma biribi ho kwan a, gye tom”
Sɔhwɛ a yɛafa mu nyinaa no, yɛasua nneɛma pii afi mu:
Fa wo ho to Yehowa so bere nyinaa, na sɛ ɔma biribi ho kwan a, gye tom. Mmfa wo ho ntweri w’ankasa ntease.—Mmeb. 3:5, 6; Yer. 17:7.
Ma Bible nkyerɛ wo kwan wɔ biribiara mu. Ehia sɛ yetie Yehowa ne ne mmara. Sɛ yɛantie no a, ɛkyerɛ sɛ yɛbɛyɛ no so asoɔden; yɛrentumi nka sɛ yegyina mfinimfini.—Rom. 6:16; Heb. 4:12.
Ade a ɛho hia paa ne sɛ yebenya din pa wɔ Yehowa anim. Fa Yehowa apɛde di kan wɔ w’asetenam, ɛnyɛ ahonyade.—Mmeb. 28:20; Ɔsɛnk. 7:1; Mat. 6:33, 34.
Srɛ Yehowa na ɔmma wo ahoɔden a wode bɛyɛ n’adwuma no yiye. Hwɛ nea wubetumi ayɛ, ɛnyɛ nea worentumi nyɛ.—Mat. 22:37; 2 Tim. 4:2.
Ma ɛntena w’adwenem sɛ ahyehyɛde foforo biara nni hɔ a Yehowa gye tom na ohyira so.—Yoh. 6:68.
Me ne Grace atena bɛyɛ mfe 65 ni, na yɛn mu biara de bɛboro mfe 75 asom Yehowa. Sɛ yɛse yɛreka anigye a yɛanya wɔ Yehowa som mu saa bere yi nyinaa a, anka adagyew bɛbɔ yɛn. Yɛn mpaebɔ ne sɛ yɛn nuanom mmarima ne mmea nyinaa nso behu sɛ, sɛ obi de ne ho to Yehowa so a, nhyira pii wom.